Nhau - Varume nevakadzi mitambo sutu silhouette maitiro
Mitambo yevarume nevakadzi sutu silhouette maitiro
2022 ekutanga kwematsutso evarume nevakadzi emitambo sutu zvinhu zvinokanganiswa ne pragmatism, uye ichanyanya kutarisa kune fashoni mafashoni uye inogona kupfekwa kakawanda. rakafemerwa nezvinhu zvemitambo sutu mune 2021 yekuvhuvhu uye yechando nyowani mwaka show, chera zvakadzama mune akasiyana akateedzana emafashoni emitambo Fashoni silhouettes emasutu. Masutu akasimba akasimba anogona kupfekwa kakawanda. Iyo inochinjika inogadziriswa dhizaini uye yemhando yepamusoro yekupwanya masutu inowedzera vatengi 'pfungwa yekuchinjika uchinge uchinyorova; kubwinya kwevelvet uye micheka ye sequin inopa yakaderera-yakasarudzika mameseji mumitambo yemafashoni. Iyo yakasununguka imba sutu inovimbisa nyaradzo nekuwedzera zvimwe zvakadzama dhizaini uye mbiri shanduko kusangana nezvinodiwa uye kuita kweakawanda-epasi akapfeka; shanduko yemasutu e retro akasiyanasiyana uye akasimba muprofita, achiunza zvimwe ku retro muma 90s Dhizaini dhizaini.
Mhando dzese dzemafashoni emitambo dzakapfekedzwa kubva kune ichangoburwa show mumatsutso uye munguva yechando ya2021. Kune masutu emitambo akasiyana siyana senge remangwana tekinoroji, inotonhorera mashandiro, fashoni yepamusoro-panzira uye retro fashoni; pazasi, isu tinonyora akati wandei marudzi emitambo zvakadzama zvichibva pane silhouette. Kuongorora kwakadzama kwemasutu kunopa kukurudzira kwevagadziri kuti vagadzire masutu emitambo yemafashoni epamberi pematsutso.
Yakarongedzwa yekugadzira uye kupfeka inzira nyowani mukutanga kwematsutso a2022, ayo anoshandiswa mune zvefashoni masutu emitambo kuwedzera zvakakosha; mushure mekugwinya kwemukati, unogona kupfeka zvakananga maT-shirts kana majasi pazvipfeko zvemukati zvemitambo kudzivirira kunyadziswa kwekuve wakashama panguva imwe chete, zvinowedzera aesthetics uye zvinowana kugona kwekuchinja pakati pezviono zvakawanda mune rimwe rokwe. Iyi mhando yesutu inoda kutarisirwa mukutanga kwematsutso a2022.
Iyo inogadziriswa dhizaini nzira iri nzira nyowani nyowani mukutanga kwematsutso a2022. Inochinjika uye inodzika pasi pekutonga kwevatengi, inoitisa kudzora kwekushisa, kudzora kwekushongedza uye kuwedzera kugona kwechigadzirwa chimwe chete; senge kuburitswa kwazvino kweAdidas mumwaka mutsva wa2021 uye American diva. Iyo yakatetepa yakatetepa pasi mujoinhi dzakateedzana ine kusanduka uye kusungika kusona muchiuno nemupendero, izvo zvinogona kugadzirisa kureba kwezasi uye kunyangwe kupatsanurwa hem kunogona kushandiswa sechirafu chine fashoni, ichiziva mukana wekupfeka akawanda maumbirwo mune rimwe rokwe ; Mune sleeve keji, iyo inogona kudzikiswa kurapwa kwegokora rakabatana gumbo inogona kuzadzikisa kugarisana kweinoshanda uye yekushongedza runako.
Unyanzvi hwekutsikisa hunotaurwa kakawanda mukugadzirira-kupfeka uye zvipfeko zvemitambo. Mwaka uno, chinotariswa kuri pahunyanzvi hwekuparadza sutu imwe chete; kutsemura zvishoma zvakapamhidzirwa micheka yedonje kana yakashongedzwa-yakaita bhora-yakashongedzwa pamativi emawoko emaoko Izvo zvinogadzira. Kechipiri, inogadziriswa yakajeka kupenya kwemavara inoitwa pane mutirauzi muviri kuwedzera kufarira kwevatengi mukutamba. Panguva imwecheteyo, akajeka mavara mapatani anogona kugadzirwa pane yemukati mesh kusimudzira pfungwa yekushongedza.
Iyo velvet yekugadzirwa kwemucheka inoburitsa zvishoma kubwinya, izvo zvinounza mwenje wakasarudzika kune yakazara zvipfeko. Yakasanganiswa ne siluetti yesutu yemitambo, inowedzera runako rwefashoni pahwaro hwekuona kunyaradzwa kwemitambo; chepiri, iyo sequin jira uye inopenya corduroy yekumusoro machira ese ari maviri epakutanga Sarudzo yakanaka pasi pechitaera.
Masutu emusha emwaka mutsva akasununguka anoteerera zvakanyanya kushanduka kweiyo mbiri uye runako rwemashoko pahwaro hwekuona iko kuita kwekunyaradza. Dhizaini yakawedzeredzwa yemutsipa, kushongedzwa kwechiuno uye kucheka-cheka kwemakumbo ebhurugwa zvese zvinoshandura zvido zvekunaka kwemumba mukutanga kwematsutso a2022. Maseti akasiyana epamusoro uye ezasi anogona kuunzwa kuwedzera pfungwa yekuita kumba.
Iyo retro inonzwa ine nzvimbo mune 2021 yekuvhuvhu uye yechando nyowani mwaka show. Iyo 2022 yekutanga kwematsutso retro inonzwa sutu yemitambo yakasarudzika kune inoonekwa pfungwa yeyunifomu yechikoro. Iyo nyowani uye yakapenya retro yakasvibirira yakashongedzwa sutu inowedzera iyo inozorodza uye yakajeka manzwiro kune akateedzana; panguva imwecheteyo, iyo retro tsvuku uye bhuruu akateedzana Kusona uye kusangana kweiyo webbing kunoita kuti vanhu vanzwe sekunge vari muma90s; iyo sutu inosanganisa iyo hafu siketi uye bhachi rakapfupikiswa rakashanduka richiwedzera hujaya uye fashoni muchimiro.